Apple inowedzera yakadzorerwa Apple Tarisa kune yeUS webhusaiti | Ndinobva mac
Apple inowedzera yakagadziridzwa Apple Tarisa kune yeUS webhusaiti
Apple inowedzera Apple Watch Series 1 uye Series 2 kuchikamu chezvakadzoreredzwa uye zvakagadziriswa zvigadzirwa.Pachiitiko ichi senge mune apfuura, iyo Cupertino kambani haina kutaura nezve chero chinhu kuburikidza nemagariro masocial network kana zvakafanana uye nekukasira ivo vakadzvanya bhatani kuti vashandise iyo wachi dzakadzoreredzwa. Ichokwadi kuti hazvidi kuti ubudise kubva pamusoro pematenga edzimba kuti chigadzirwa chinowedzerwa pachikamu ichi chewebsite yeApple, asi hazvimborwadzi kuraira kuti uzive kuti ivo vakawedzerwa ... Chero zvazviri, chiri chokwadi ndechekuti Vashandisi veUS vava kukwanisa kutenga Apple Yakagadziridzwa kana Yakagadziridzwa Apple Tarisa nechidimbu chakakosha pamutengo wekupedzisira.
Iyo kambani inogadzirisa uye inogadzirisa zvingangoita matambudziko neiyo kifaa uye wozoisa kumusoro kuti itengese. Zvine musoro, chigadzirwa hachisvike kune mushandisi nekutanga kurongedza uye hazvigoneke kusarudza vara kana modhi, iwe unogona chete kutenga iwo mamodheru ari muchitoro. Mune ino kesi pane akati wandei uye zvikwereti zvinokwira kusvika pamakumi masere emadhora mune dzimwe nguva.
Kune avo vasingazive zvakagadziridzwa kana kugadziridzwa neApple zvinoreva Isu tinonamira iwo mavara ekambani pachayo pane izvi zvigadzirwa:
Tisati tasunungura zvigadzirwa zveApple Certified zvakagadziridzwa, isu tinozviisa kuburikidza neyakaomarara maitiro kuona kuti vanosangana nemhando yedu yemhando. Zvinosanganisira yedu yegore-yakatemwa warandi uye kugona kutenga AppleCare yekuwedzera kufukidza.
Zvino chinhu chete chiripo ndechekuti ivo vanotanga kutengeswa kune dzimwe nyika uye kuti vanosvika kuSpain nekuti vanogona kuve yakanaka sarudzo kune avo vanoda kuchengetedza zvishoma pakutenga kwechigadzirwa cheApple uye ine warandi yegore rimwe chete warandi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inowedzera yakagadziridzwa Apple Tarisa kune yeUS webhusaiti
Iyi ndiyo yemukati maAirPod matsva
Iyo PopClip app yakadzikiswa kwenguva yakati rebei